Hydrogen peroxide Sekuyisikhathi eside ezitholakala isicelo kwezokwelapha ngenxa deodorizing yayo izakhiwo, ikhono ukumisa igazi futhi ngikhonze njengomshumayeli wesikhathi isinqandakuvunda ezinhle. Lesi sidakamizwa isetshenziswa ngaphandle ukusikeka kanye nokulimala, okungukuthi, ezimweni lapho isikhumba siphukile. Injongo nokusebenzisa kwayo ukuhlanzwa mechanical kanye amanxeba magciwane ukuvundulula. I-hydrogen peroxide, ukusetshenziswa kwezokwelapha zazo yilona lokuvikela kwegciwane eyisidalwa esinenkululeko eqinile oxidizing, abhubhise Amagciwane. Nge ukusekela amasosha omzimba wendawo zomuthi ngokushesha ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi umonakalo kwesikhumba futhi isilonda ivaliwe ngokushesha.
I-hydrogen peroxide, okuyinto kusetshenziswa imithi ikakhulukazi ngaphandle kokuthola futhi ngaphakathi lokondla-mpilo izivikeli mzimba amaseli, kanye ukuze kubulawe amangqamuzana omdlavuza nokubhujiswa nezilwanyana ezincane.
Ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kungenzeka kuphela ngenxa yokulimala noma ukusikeka. Uma kungekho izinguquko kubonakala isikhumba, Bawushisa Amapayipi excretory izithukuthuku futhi nezindlala sebaceous. Lokhu kuzonciphisa uketshezi izithukuthuku futhi isikhumba greasiness ubuthi overload nezinso. Esimweni esinjalo kungenzeka ukuthuthukisa induna. Hydrogen peroxide asikwazi ukuphathwa, futhi zamanzi. indawo machining nge microdamages hhayi balimaze emzimbeni.
Hydrogen peroxide uthola isicelo kwezokwelapha ngemithambo yegazi. Nge ukwethulwa walesi oxidant asebenzayo ngqo igazi detoxified ubuthi equkethwe kuwo. Le nqubo uyakwazi akhulule isibindi. Ngokwandisa inesikhala kwemithambo yenhliziyo incipha ukuvama ukuhlaselwa angina.
- izifo ezibangelwa amagciwane,
- fungal izifo,
- ubovu ukutheleleka,
- isifo senhliziyo kanye igazi izitsha,
- Izifo imithambo neuropathy igazi ebuchosheni,
- varicose emithanjeni,
Ngo izifo zidinga ukwelashwa eside.
Hydrogen peroxide uthola isicelo kwezokwelapha ekwelapheni emlonyeni nezinsini. Ukususa isixazululo lasetshenziswa amaphesenti amathathu. Lapho isifo periodontal Kunconywa wagcoba angena ikhambi gum ehlanganisa ketshezi soda. Lesi sidakamizwa liyasetshenziswa ukuqeda onukayo futhi amazinyo mhlophe. Alternation kusiza hashaza izixazululo amaphesenti amathathu peroxide kanye potassium permanganate nge angina. Ngo rhinitis futhi sinusitis usebenzisa isixazululo amaphesenti omunye. Sebenzisa i-ejenti okunjalo futhi nokugeza acinene. It ngempumelelo kusiza ukuvuvukala maphakathi nendlebe, kodwa kulokhu iqondiswa usebenzisa Tampon.
Hydrogen peroxide e zabesifazane
Lesi sidakamizwa uthola isicelo ekwelapheni thrush. Ukuze ukwelashwa of candidiasis lwesitho sangasese sowesifazane kuyadingeka ukuze ayeke ekwandeni isikhunta e sangasese. Ngenxa yale njongo, douching wenziwa ezintathu isixazululo amaphesenti-hydrogen peroxide ukuqeda izimpawu zesifo. Libuye libe yindlela esetshenziswa ngenjongo magciwane, kuleso simo basuke kusetshenzwe ngokucophelela zonke evele mucosal.
Hydrogen peroxide isetshenziswa, ukusetshenziswa ifomu yezokwelapha okuyinto ezimweni eziningi ezintathu isixazululo amaphesenti futhi ngesimo amaphilisi. Lokuhlushwa lomcebo okukukho amaphesenti ayishumi.
Isetshenziselwa lesi sakhiwo kanye ekhaya. Bona bleached izindwangu ukotini futhi okukhipha izindawo ngemibala. Iwusizo izidakamizwa elokusula amaqabunga izitshalo zasendlini, kanye ukubuya uhlobo okumnandi isaladi. Futhi ulisebenzise ukuze uthuthukise isenzo izinto zokususa amabala.
Hydrogen peroxide izindleko kakhulu futhi kakhulu ejenti zokwelapha okwathi lapho, uma isetshenziswe ngendlela efanele ngeke balahle izifo eziningi.
"Laminal": imfundo manual, ukubuyekezwa kanye analogue
Indlela ukupheka peas: Izimfihlo Excellence
I kwangaphakathi uhlangothi kwethanga